ညီလင်းသစ်: မြူခိုး၊ တိမ်ငွေ့၊ တောင်တန်းများနှင့်...
Posted by ညီလင်းသစ် au 23.9.14
ဇုကီနီကြော် ဆိုတာ ဘာလဲ အစ်ကို ?
အကို့စာတွေကိုဖတ်လိုက်ရရင်တကယ်ရောက်သွားသလိုကိုခံစားရတာ ပုံတွေကဆိုလဲ ကြည့်ပြီးတကယ်အဲဒီနေရာမှရပ်နေရသလိုကိုခံစားရတယ် ဘိုင်သဝေးပေါ့ တခါလောက်တော့ မြန်မာစာကျောင်းသားလေးနဲ့ဆုံချင်သေးတယ် သူ့ကိုမြန်မာစာကျွေးပြီးသူနဲ့စကားပြော ဆော့ချင်တယ် .
တောင်ပေါ်ရွာလေးဆီ ကိုယ်တိုင် အလည်အပတ် ရောက်သွားသလို ခံစားရတယ် မောင်ညီလင်းရေ… ‘မြူခိုး တိမ်ငွေ့ တောင်တန်းများနှင့်’ ရိုက်ချက်ပြင်းပြင်း ရှုခင်းလေးတွေမြင်ရတာ စိတ်ကိုကြည်နူး လန်းဆန်းစေတယ်။ မိုနိုပိုလီကိုမြင်ပြန်တော့ တီတင့်တို့ မောင်နှမ စုံစုံလင်လင် နေခဲ့စဉ် အချိန်ကာလလေးကို သတိရသွားတယ်။ ညရှုခင်းလေးရဲ့လှချက်.....
နေ့ လည်ကရုိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေပြန်ကြည့်နဲ့ ပျော်ပျော်
ကော်ဖီလေးနဲ့ လက်ဖက်နဲ့ စားသောက်ရင်းရှုခင်းတွေထုိုင်ကြည့်လိုက်အုန်းမယ်။
ညရှုခင်းလေး လှလိုက်တာ။ စမ်းချောင်းလေးဘေးမှာ ရပ်ရင်း ထင်းရှူးနံ့လေးတွေ ရနေသလို ကျေးငှက်သံကလေးတွေများကြားနေမလားလို့ ခံစားကြည့်မိတယ်။ အိမ်ကလေးက နေချင်စရာလေး။
မှိုဟင်းကလည်း ကောင်းမယ့်ပုံပဲ.. ချက်ထားပုံက
ဒီမှာတော့ မှိုရှာ အလောင်းတွေ့လို့ ပြောကြတယ် :D
မှုခင်းသတင်းတွေထဲမှာ တောထဲ ဖွက်ထားတဲ့အလောင်းကို မှိုရှာသူတွေ သွားသွားတွေ့ကြတာမျိုး ကြားရတယ်....
သားသားက အတော်လေး ကြီးလာသလိုပဲ။ ပိုချောလာတာကတော့ အဖေအမေ မမီနိုင်တော့ဘူး။ မှိုရတဲ့မျက်နှာကို ဆယ်လ်ဖီရိုက်ဖို့ မေ့သွားတယ်လဲ ဆိုရော ရယ်မိပါလေရော ကိုညီရေ။ ဒီမှာတော့ ဘ၀တွေက အဲ့သည်လို အေးချမ်းစွာနဲ့ အနားယူဖို့ ခွင့်မပြုတဲ့စက်ရုပ်ဘ၀တွေပေါ့။ အေးမြတဲ့ မြက်ခင်းစိမ်းနဲ့ မြို့ပြနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာမှာ တောတောင်အရိပ်တွေနဲ့ တကယ့်ကို အေးချမ်းခဲ့မှာ မြင်ယောင်မိပါရဲ့။
I feel very familiar with the first two pictures. But the one I've seen is totally covered with snow.
တိမ်တွေ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတာပဲ ပြီးတော့ မြန်မာစာကျောင်းသားလေးပါး)
တစ်ခုပဲ အဲ့လောက်လှတဲ့နေရာကို ချစ်စရာမိသားစုနဲ့ ခရီးထွက်ရတဲ့ ဦးလေးကြီးကို မနာလိုချက်က ၉ ကျော်တယ် ။
ကိုညီလင်းတို့များ မြို့ကြီးသား မြို့ကြီးသားနဲ့ ခဏခဏ ကြွားတာပဲကိုး။
Cheese fondue ကို သားသားနဲ့ အတူ စားကြည့်ချင်လိုက်တာ။ စားရင်းနဲ့ ကစားချင်လို့ :D
ပြီးတော့ အရည်ဖျော် အနွေးထည်လေးလဲ မှီဝဲကြည့်ချင်စမ်းပါဘိ။ ဟိဟိ ;)
နောက်ပြီး အဲဒီနေရာလေးကို ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသည့်အလား ခံစားလို့ရအောင် ဓာတ်ပုံနဲ့ရော စာနဲ့ပါ ပုံဖော်တတ်တဲ့သူရဲ့ မှိုရတဲ့ မျက်နှာကိုလဲ တွေ့ချင်ပါသေးတယ်။ :)
စာဖတ်ပြီးတော့ ပိုပြီးရောက်ဖူးချင်တယ်သားလေးကကြီးလာပြီနော်......အဲဒီနေရလေးက သူများတွေတော့ မသိဘူး ဂျက်ကတော့ လွမ်းစရာကောင်းပြီ ကဗျာတွေရေးလို့ကောင်းမဲ့နေရာလေးလို့ထင်တယ်
မိသားစုနဲ့အတူနေရသူအဖို့ကတော့ မနာလိုစရာကောင်းလှတယ် ဘာဖြစ်လိုလဲဆိုတော့ သာသာယာယာနဲ့ လှပနလို့ပါ
နောက်ပြီး ဂျက်တို့လဲ နွေရာသီဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး မိနိုပိုလီ ကစားကြတယ်.....အရာအားလုးအမှတ်ရစရာလေးတွေပေါ့နော်
ညလေးညို... ဇုကီနီဆိုတာ သခွားသီးလိုပဲ စိမ်းစိမ်းရှည်ရှည်လေး။ ဒါပေမယ့် သူက သခွားသီးလို အရည်မရွှမ်းဘူး။ ပန်းကန်ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကဟာ ဇုကီနီလေ။ ဇုကီနီကို အချဉ်စိမ်ပြီး အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ထဲလည်း ထည့်စားလို့ရတယ်။ ချိစ်များများပါတဲ့ အီတဲ့အစားအစာမျိုးစားတဲ့အခါ အအီပြေအောင် အချဉ်စိမ်ထားတဲ့ ဇုကီနီကို တွဲဖက်စားလေ့ရှိကြတယ်။ နောက်ပြီး ဇုကီနီကို နူးအိရုံလေး ပြုတ်ပြီး အသီးအရွက်သုပ် (ဆဲလတ်) တွေမှာလည်း ထည့်စားလေ့ရှိတယ်။ ပြုတ်လိုက်ရင် ဒါမှမဟုတ် ရေနွေးငွေ့နဲ့ အပူပေးလိုက်ရင် ခရမ်းသီးအိသလိုမျိုးလေး ဖြစ်သွားတယ်။
(အကိုညီလင်းကိုယ်စား ခပ်တည်တည်ဖြင့် ၀င်ဖြေသွား)
အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဒီအသီးမျိုး မတွေ့ရပေမယ့် ဥရောပနဲ့သြစတြေးလျမှာတော့ ဇုကီနီကို တော်တော်စားလေ့ရှိတယ် ညို။ အထူးသဖြင့် အဖြူတွေပေါ့။ ဇွန့်အမြင်အရတော့ ဂျာမန်တွေဟာ ဇုကီနီကို အတော်လေးကြိုက်ကြပုံပေါ်တယ်။း)
အပန်းဖြေဆိုတဲ့အတိုင်း ဖတ်ရတဲ့သူတောင် အမောပြေပြီ ကြည်နူးသွားရတယ်။
အိမ်ကလေး နေရာကော အစီအမံကော သဘောကျတယ်ဗျာ။ ကိုယ်ပိုင်များဖြစ်ရင် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ချင်သေး ..း)
Like. I have to read once I see new post of yours. worth it. Really nice reading.
ချင်းတောင်ကိုလည်း သေသေသပ်သပ် နဲ့ လှလှပပလေး လုပ်နိုင်ရင်
ဟိုးးးဘက်တောင်ကြောက မီးပွင့်လေးတွေ လင်းလာပုံက
ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့တင် ရင်ထဲ အေးချမ်းသွားတယ်။ မိသားစု အစဉ် အေးချမ်း ပျော်ရွှင်ပါစေ။ သားသား အတော် ထွားလာပြီ။ ချောလည်းချောတယ်။
ဒီမှာလည်း country fever တက်နေချိန်နဲ့ အံကိုက်လိုက်တာ...ဆရာရယ်... :)
မှိုရတဲ့ မျက်နှာ မမြင်လိုက်ရဘူး။ အဲဒီညစာက တော်တော် အရသာရှိမယ့်ပုံပဲ။ မိုနိုပိုလီကတော့ ငယ်ငယ်က တဝမ်းကွဲတွေနဲ့ တွေတိုင်း ဆော့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ အစ်ကို့သားလေးလည်း လူကြီးစတိုင် ပေါက်လာပြီ။
အခုလိုဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အစ်ကို့ဘ၀ကိုတကယ်ပဲအားကျမိပါတယ်!
ကိုညီလင်းရေ အကို့စာတွေဖတ်ပြီး ဆွစ်ဇလန်ကိုသိပ်လာလည်ချင်တာပဲ။လှလွန်းလို့လေ။ တကယ်လာဖြစ်ရင်တော့ အကို့ကိုမေးပြီး ဒီလိုနေရာတွေလျှောက်သွားမှာပဲ။ Adora ကတိုးရစ်နေရာတွေထက် ဒီလိုသဘာဝအလှအပတွေရှိတဲ့ နေရာတွေမှာအေးအေးချမ်းချမ်းလျှောက်လည်ချင်တာ။ cheese fondueလေးကိုသွားရေကျ၊ ရှူခင်းစိမ်းစိမ်းလေးတွေကိုလဲ သဘောကျ၊ ပြီးတော့အကို့ရဲ့ မြန်မာကျောင်းသား ချောချောလေးကိုလဲ ချစ်သွားတယ် အကိုရေ။
ဖုန်းနဲ့ဖတ်ပြီးပြီ..။ အခု ကွန်ပြူတာနဲ့မှ တစ်ခေါက်ထပ်လာကြည့်တာ..။ ပုံတွေ မြင်ရတာ အခုမှ ပိုပီပြင်သွားတယ်..။
အဲလို နေရာတွေ သဘောကျလိုက်တာ အကိုရာ..။
အကိုလည်း နားရက်တွေ ကုန်တော့မယ်ထင်ပါ့..။
တိမ်တွေကော တောင်ကုန်းလေးကော အရမ်းသဘောကျတယ်..။